08.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– अहिले सारा दुनियाँको बृहस्पतिको दशा छ , बाबाले तिमी बच्चाहरूद्वारा विश्वलाई सुखधाम बनाइरहनु भएको छ।”
१६ कला सम्पूर्ण बन्नको लागि तिमी बच्चाहरूले कुनचाहिँ पुरुषार्थ गर्छौ?
(१) योगबल जम्मा गर्ने। योगबलद्वारा तिमी १६ कला सम्पूर्ण बनिरहेका छौ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ– दे दान तो छुटे ग्रहण। काम विकार जसले गिराउँछ त्यसको दान दियौ भने तिमी १६ कला सम्पूर्ण बन्छौ। (२) देह-अभिमान छोडेर देही-अभिमानी बन, शरीरको भान छोडिदेऊ।
तुम मात पिता......
मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले आफ्नो रूहानी बाबाको महिमा सुन्यौ। उनीहरूले गायन गरिरहन्छन्, यहाँ तिमीले यथार्थमा उहाँ बाबाबाट वर्सा लिइरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ– बाबाले हामीद्वारा नै विश्वलाई सुखधाम बनाइरहनु भएको छ। जसद्वारा बनाइरहनु भएको छ, अवश्य उनै सुखधामको मालिक बन्छन्। बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबाको महिमा अपरम्पार छ। उहाँबाट हामीले वर्सा पाइरहेका छौं। अहिले तिमी बच्चाहरूको मात्र होइन, सारा विश्वमा बृहस्पतिको अविनाशी दशा छ। अहिले तिमी ब्राह्मणहरूले नै जानेका छौ–अब सबैको बृहस्पतिको दशा बस्छ किनकि तिमी अब १६ कला सम्पूर्ण बन्छौ। यतिबेला त कुनै कला छैन। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। यस्तो होइन यहाँ खुसी हुन्छ, बाहिर जाने बित्तिकै खुसी गुम होस्। जसको महिमा गाउँछन्, उहाँ अहिले तिम्रो अगाडि हाजिर हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– ५ हजार वर्ष पहिला पनि तिमीलाई राजाई दिएर गएको थिएँ। अब तिमीले देख्छौ– बिस्तारै-बिस्तारै सबैले पुकारिरहन्छन्। तिम्रा पनि स्लोगन निस्किरहन्छन्। जसरी इन्दिरा गान्धीले भन्दथिन्– एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई होस्, उनमा पनि आत्माले भन्छ नि। आत्माले जान्दछ– अवश्य यहाँ एक राजधानी थियो, जुन अहिले सामुन्ने छ। सम्झन्छन्– कुनै पनि बेला सारा समाप्त हुन सक्छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। भारतवर्ष फेरि १६ कला सम्पूर्ण अवश्य बन्नु छ। तिमीले जानेका छौ– हामी यस योगबलबाट १६ कला सम्पूर्ण बनिरहेका छौं। भन्छन् नि– दे दान तो छुटे ग्रहण। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ– विकारको, अवगुणको दान देऊ। यो रावण राज्य हो। बाबा आएर यसबाट छुटाउनु हुन्छ। यसमा पनि काम विकार धेरै ठूलो अवगुण हो। तिमी देह-अभिमानी बनेका छौ। अब देही-अभिमानी बन्नुपर्छ। शरीरको भान पनि छोड्नुपर्छ। यी कुरालाई तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ। दुनियाँले जान्दैन। भारतवर्ष जुन १६ कला सम्पपूर्ण थियो, सम्पूर्ण देवताहरूको राज्य थियो, अहिले ग्रहण लागेको छ। यी लक्ष्मी-नारायणको राजधानी थियो नि। भारतवर्ष स्वर्ग थियो। अहिले विकारहरूको ग्रहण लागेको छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– दे दान तो छुटे ग्रहण। यो काम विकारले नै गिराउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– यो दान दियौ भने तिमी १६ कला सम्पन्न बन्छौ। दिएनौ भने बन्दैनौ। आत्माहरूलाई आ-आफ्नो पार्ट मिलेको छ नि। यो कुरा पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। तिम्रो आत्मामा कति पार्ट छ। तिमीले विश्वको राज्य-भाग्य लिन्छौ। यो बेहदको ड्रामा हो। अथाह कलाकारहरू छन्। यसमा फस्टक्लासका कलाकार हुन् यी लक्ष्मी-नारायण। यिनीहरूको पहिलो नम्बरको पार्ट छ। विष्णु नै ब्रह्मा-सरस्वती फेरि ब्रह्मा-सरस्वती नै विष्णु बन्छन्। यिनले ८४ जन्म कसरी लिन्छन्। सारा चक्र बुद्धिमा आउँछ। शास्त्र पढेर कहाँ कसैले सम्झन्छन्। उनीहरूले त कल्पको आयु नै लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। फेरि त स्वस्तिक पनि बन्न सक्दैन। व्यापारीहरूले खातामा स्वस्तिक बनाउँछन्। गणेशको पूजा गर्छन्। यो हो बेहदको खाता। स्वस्तिकमा ४ भाग हुन्छन्। जसरी जगन्नाथपुरीमा चामलको हण्डी राख्छन्, त्यो पाकेपछि चार भाग हुन्छ। त्यहाँ चामलको भोग लगाउँछन् किनकि त्यहाँ धेरै भात खान्छन्। श्रीनाथद्वारमा चामल हुँदैन। त्यहाँ त सबै शुद्ध घिउको सक्कली माल बन्छ। जब भोजन बनाउँछन् तब सफाइसँग मुख बन्द गरेर बनाउँछन्। धेरै इज्जतसँग प्रसाद लैजान्छन्, भोग लगाएर फेरि त्यो सबै पण्डाहरूलाई मिल्छ। दोकानमा लगेर राख्छन्। त्यहाँ धेरै भीड हुन्छ। यी बाबाले देखेका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कसले पढाइरहनु भएको छ? परमप्रिय बाबा आएर तिम्रो सेवक बन्नु भएको छ। तिम्रो सेवा गरिरहनु भएको छ, यति नशा चढ्छ? हामी आत्माहरूलाई बाबाले पढाउनु हुन्छ। आत्माले नै सबैथोक गर्छ। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ। तिमीले जानेका छौ– आत्मामा त ८४ जन्मको अविनाशी पार्ट भरिएको छ, त्यसलाई फेरि निर्लेप भन्नु कति रात-दिनको फरक हुन जान्छ। यो कुरा जब कसैले एक डेढ महिना बसेर बुझ्छ अनि यी प्वाइन्टहरू बुद्धिमा बस्छन्। दिन-प्रतिदिन प्वाइन्टहरू त धेरै निस्किरहन्छन्। यो कस्तुरी जस्तै हो। बच्चाहरूलाई जब पूरा निश्चय हुन्छ, तब सम्झन्छन्– अवश्य परमपिता परमात्माले नै आएर दुर्गतिबाट सद्गति गर्नुहुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ– अहिले तिमीमाथि बृहस्पतिको दशा छ। मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाएँ, अब फेरि रावणले राहूको दशा बसाइदियो। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ स्वर्गको मालिक बनाउन। त्यसैले आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन। व्यापारीहरूले आफ्नो खाता सदैव ठीक राख्छन्। घाटा पार्नेहरूलाई बेसमझ भनिन्छ। अब यो त सबैभन्दा ठूलो व्यापार हो। कसैले विरलै यो व्यापार गर्छन्। यो अविनाशी व्यापार हो। अरू सबै व्यापार त माटोमा मिल्छ। अहिले तिम्रो सच्चा व्यापार भइरहेको छ। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, सौदागर, रत्नागर। हेर प्रदर्शनी हेर्न कति आउँछन्। सेवाकेन्द्रमा कोही मुश्किलले आउँछन्। विश्व त धेरै लम्बा-चौडा छ। सबै स्थानमा तिमी जानु छ। पानीका गंगा त सारा दुनियाँमा छन्। यो पनि तिमीले सम्झाउनु पर्छ– पतित-पावन कुनै पानीका गंगा होइनन्। तिमी ज्ञान गंगाहरू जानुपर्छ। चारैतिर मेला प्रदर्शनी भइरहन्छन्। दिन-प्रतिदिन चित्र बनिरहन्छन्। यस्ता शोभायमान चित्र हुन्, जो देख्दा नै आनन्द आओस्। यिनीहरूले त ठीकै सम्झाउँछन्, अहिले लक्ष्मी-नारायणको राजधानी स्थापना भइरहेको छ। सिँढीको चित्र पनि फस्टक्लास छ। अहिले ब्राह्मण धर्मको स्थापना भइरहेको छ। यी ब्राह्मणहरू नै देवता बन्छन्। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, त्यसैले मनमनै आफैंलाई सोधिराख– म भित्र कुनै साना-तिना काँडा त छैनन्? कामको काँडा त छैन? क्रोधको सानो काँडा, त्यो पनि धेरै नराम्रो हो। देवताहरू क्रोधी हुँदैनन्। देखाउँछन्– शंकरको आँखा खुलेपछि विनाश हुन्छ। यो पनि एक कलंक लगाएका छन्। विनाश त हुनु नै छ। सूक्ष्मवतनमा शंकरको सर्प आदि कहाँ हुन सक्छन्। सूक्ष्मवतन र मूलवतनमा बगैंचा सर्प आदि केही पनि हुँदैनन्। यी सबै यहाँ हुन्छन्। स्वर्ग पनि यहाँ हुन्छ। यतिबेला मनुष्य काँडा जस्तै छन्, त्यसैले यसलाई काँडाको जंगल भनिन्छ। सत्ययुग हो फूलको बगैंचा। तिमीले देखेका छौ– बाबाले कस्तो बगैंचा बनाउनु हुन्छ। अति सुन्दर बनाउनु हुन्छ। सबैलाई सुन्दर बनाउनु हुन्छ। स्वयं सदा सुन्दर हुनुहुन्छ। सबै प्रियतमाहरू अथवा बच्चाहरूलाई सुन्दर बनाउनु हुन्छ। रावणले बिल्कुलै कालो बनाइदिएको छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ– हामीमा बृहस्पतिको दशा रहेको छ। आधा समय सुख, आधा समय दु:ख भयो भने त्यसबाट फाइदा नै के? तीन चौथाइ सुख, एक चौथाइ दु:ख हुन्छ। ड्रामा यस्तो बनेको छ। धेरै मानिसहरूले सोध्छन्– यस्तो ड्रामा किन बनाइएको हो? अरे यो त अनादि हो नि। किन बन्यो, यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। यो अनादि अविनाशी ड्रामा बनेको छ। बनिबनाउ बनिरहेको छ। कसैलाई पनि मोक्ष मिल्न सक्दैन। यो अनादि सृष्टि त चल्दै आउँछ, चलिरहन्छ। प्रलय हुँदैन।
बाबाले नयाँ दुनियाँ बनाउनु हुन्छ तर यसमा कति गुन्जाइस छ। जब मनुष्य पतित दु:खी हुन्छन् अनि बाबालाई बोलाउँछन्। बाबा आएर सबैको काया कल्प गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा आधाकल्प तिम्रो कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन। तिमीले कालमाथि विजय पाउँछौ। त्यसैले बच्चाहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जति उच्च पद पायो त्यति राम्रो हो। पुरुषार्थ त हरेकले धेरै कमाईको लागि गर्छन् नै। दाउरा बोक्नेले पनि भन्छ मैले धेरै कमाई गरुँ। कसैले ठगी गरेर पनि कमाउँछन्। पैसा नै समस्याको कारण हो। त्यहाँ त तिम्रो पैसा कसैले लुट्न सक्दैन। हेर दुनियाँमा त के के भइरहेको छ। त्यहाँ यस्तो कुनै दु:खको कुरा हुँदैन। अहिले तिमीले बाबाद्वारा कति वर्सा लिन्छौ। आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ– म स्वर्गमा जान लायक छु? (नारदको उदाहरण)। मनुष्यले अनेक तीर्थ आदि गर्छन्, प्राप्ति केही पनि हुँदैन। गीत पनि छ नि– चारैतर्फ लगायौं फेरा, फेरि पनि हरदम दूर रह्यौं। अहिले बाबाले तिमीलाई कति राम्रो यात्रा सिकाउनु हुन्छ। यसमा कुनै कष्ट छैन। बाबा भन्नुहुन्छ– केवल म एकलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। धेरै राम्रो युक्ति सुनाउँछु। बच्चाहरूले सुन्छन्। यो मेरो सापटी लिएको शरीर हो। यी बाबालाई कति खुसी हुन्छ। मैले बाबालाई शरीर सापटी दिएको छु। बाबाले मलाई विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। नाम पनि छ भागीरथ। अहिले तिमी बच्चाहरूले रामपुरीमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। त्यसैले पूरा पुरुषार्थमा लाग्नुपर्छ। काँडा किन बन्छौ।
तिमी ब्राह्मण-ब्राह्मणीहरू हौ। सबैको आधार मुरलीमा छ। तिमीलाई मुरली मिलेन भने तिमीले श्रीमत कहाँबाट ल्याउँछौ? अब त प्रदर्शनीका चित्रहरू पनि सम्झाउनको लागि राम्रा बनेका छन्। यी मुख्य चित्र त आफ्नो दोकानमा राख, धेरैको कल्याण हुन्छ। भन, आउनु भयो भने हामीले तपाईंलाई सम्झाउने छौं, यो सृष्टिचक्र कसरी घुम्छ? कसैको कल्याण गर्नमा अलिकति समय गयो भने पनि के फरक पर्यो त? त्यो सौदाको साथसाथै यो सौदा गराउन सक्छौ। यो बाबाको अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको पसल हो। नम्बरवन हो सिँढीको चित्र र गीताका भगवान शिवको चित्र। यहाँ शिव भगवान आउनु भएको थियो, जसको जयन्ती मनाउँछन्। अहिले फेरि उहाँ बाबा आउनु भएको छ। यज्ञ पनि रचिएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई राजयोगको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। बाबा नै आएर राजाहरूका राजा बनाउनु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले तिमीलाई सूर्यवंशी राजा-रानी बनाउँछु, जसलाई फेरि विकारी राजाहरूले नमन गर्छन्। त्यसैले स्वर्गका महाराजा-महारानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबाले कुनै घर आदि बनाउन मनाही गर्नुहुन्न। ठीक छ बनाऊ। पैसा पनि त माटोमा मिल्छ, त्यो भन्दा घर बनाएर किन आरामसँग नरहने। पैसा काममा लगाउनु पर्छ। घर पनि बनाऊ, खानको लागि पनि राख। दान-पुण्य पनि गर्छन्। जसरी कश्मीरका राजाले जति आफ्नो नीजि सम्पत्ति थियो त्यो सबै आर्यसमाजीहरूलाई दानमा दिए। आफ्नो धर्म, जातिको लागि गर्छन् नि। यहाँ त त्यो कुनै कुरा हुँदैन। सबै बच्चा हुन्। जाति आदिको कुरा छैन। त्यो हो देहको जाति आदि। मैले त तिमी आत्माहरूलाई विश्वको बादशाही दिन्छु, पवित्र बनाएर। ड्रामा अनुसार तिमीले नै राज्य-भाग्य लिन्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामी माथि बृहस्पतिको दशा बसेको छ। श्रीमतले भन्छ– म एकलाई याद गर अरू कुनै कुरा छैन। भक्तिमार्गमा व्यापारीहरूले केही न केही धर्माऊ अवश्य निकाल्छन्। त्यसको पनि अर्को जन्ममा अल्पकालको लागि प्राप्ति हुन्छ। अहिले त म डाइरेक्ट आएको छु, त्यसैले तिमीले यस कार्यमा लगाऊ। मलाई त केही चाहिँदैन। शिवबाबालाई आफ्नो लागि कुनै घर आदि बनाउनु छ र! यो सबै त तिमी ब्राह्मणहरूको लागि हो। गरिब धनवान सबै सँगै रहन्छन्। कोही-कोही रिसाउँछन्– भगवानको पासमा पनि सम दृष्टि छैन। कसैलाई महलमा, कसैलाई झुपडीमा राख्नुहुन्छ। शिवबाबालाई बिर्सिन्छन्। शिवबाबाको यादमा रहे भने कहिल्यै यस्ता कुरा गर्दैनन्। सबैलाई सोध्नु त पर्छ नि। देखिन्छ– यो घरमा आरामसँग रहन्छ त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। त्यसैले भनिन्छ– सबैको खातिरी (विशेष पालना) गर। कुनै पनि चीज छैन भने मिल्न सक्छ। बाबाको त बच्चाहरूप्रति प्यार हुन्छ। यति प्यार अरू कसैको हुन सक्दैन। बच्चाहरूलाई कति सम्झाउँछु– पुरुषार्थ गर। अरूको लागि पनि युक्ति रच। यसमा चाहिन्छ ३ पाइला पृथ्वी, जहाँ बच्चीहरूले सम्झाइरहन्छन्। कुनै ठूला मानिसको हल होस्, हामीले केवल चित्र राखिदिन्छौं। बिहान बेलुका एक दुई घण्टा क्लास गरेर जान्छन्। खर्च सबै हाम्रो, नाम तिम्रो हुन्छ। धेरैजना आएर कौडीबाट हीरा जस्ता बन्छन्। अच्छा!
१) तिमी भित्र जति पनि काँडा छन् त्यसको जाँच गरेर निकाल्नु छ। रामपुरीमा जानको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ।
२) अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको व्यापार गरेर जसको पनि कल्याण गर्न समय दिनु छ। सुन्दर बन्नु र बनाउनु छ।
फुलस्टपद्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त गर्ने महावीर भव
यस अनादि ड्रामामा रूहानी सेनाका सेनानीहरूलाई कसैले मेडल दिदैन तर ड्रामा अनुसार उनलाई श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वत: प्राप्त हुन जान्छ। यो मेडल उनलाई मिल्छ, जसले हर आत्माको पार्ट साक्षी भएर देख्दै फुलस्टपको मात्रा सहज लगाउँछन्। यस्ता आत्माहरूको जग अनुभवको आधारमा हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समस्या रूपी पर्खालले उनलाई रोक्न सक्दैन।
हर परिस्थिति रूपी पहाडलाई पार गरेर आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने उड्ता पक्षी बन।